Xoghayaha Guud ee UNWTO oo ay saaxiibo dhow ahaayeen Mussalim Afandiyev ayaa shaqada ka tegey
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Xoghayaha Guud ee UNWTO oo ay saaxiibo dhow ahaayeen Mussalim Afandiyev ayaa shaqada ka tegey
Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Sida laga soo xigtay ilo-wareedyada eTN, Mussalim Afandiyev wuxuu si la yaab leh uga tagay shaqadiisii ​​mushaharka badnayd ee UNWTO kadib markii ay isku dhaceen isaga iyo Xoghayaha Guud Zurab Pololikashvili.
Waxaa laga filayey inuu dib u dego New York oo uu matalo UNWTO Xarunta Qaramada Midoobay.
Mussalim Afandiyev waxaa badanaa loo arkaayey inuu yahay gacanta midig Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili. Mr. Afandiyev wuxuu ka soo jeedaa Azerbaijan, waxaana loo arkaayey inuu yahay nin aad u sarsare oo ka tirsan dawladda Azerbaijan. Gudaha ayaa ku eedeeyay qof ay ka baqeen dad badan oo ka shaqeeya UNWTO.
Sida laga soo xigtay ilaha qarsoodiga ah ee UNWTO, inbadan waxay u arkeen Mr. Afandiyev inuu yahay "fuliyaha" Xoghayaha Guud. Wuxuu bilaabay qandaraasle adeeg sanadka 2018 waxaana lasiin jiray EURO 4000.00 bishii. Sannadkii 2019 waxaa u dallacsiiyay Mr. Zurab jago rasmi ah wuxuuna kasbaday EURO 8,000.00 / bishii. Waxaa loo shaqaaleeyay inuu yahay "agaasimaha dib-u-habeynta", oo ah jago isaga laftiisa lagu abuuray.
Wuxuu lahaa mid ka mid ah jagooyinka ugu sarreeya shabakadda UNWTO. Waxaa loo arkay inuu yahay saaxiib dhow Mr.Pololikashvili.
eTN ma awoodin inay ku xaqiijiso macluumaadka UNWTO.